Zvikonzero zvisere: Nei Uchifanira Kunze Ongororo Dhata? - NewGenApps
Big Data, Big Data Analytics, Dhata Sayenzi, Technology Kubvunza, zvigadzirwa zvetekinoroji, zvigadzirwa zvetekinoroji
Dzimwe nguva masangano anorwira kushandura kunyange diki dhata kuita ruzivo runobatsira. Iyo inova ino mhanyisa nzira yemasangano kubata avo data nenzira yakarongeka. Dzimwe nguva ivo havakwanise kuunganidza, kuongorora pamwe nekugadzirisa dhata sezvo ivo vari mubishi nemamwe mabasa zvakare. Data analysis chikamu chakakosha chesangano chero ripi zvaro. Masangano anofanirwa kuchengetedza zvinyorwa zvakanaka uye kugadzirisa data kuitira kuti vatore sarudzo nekukurumidza uye zvine mutsindo mukuvandudza bhizinesi ravo.
Apa ndipo apo kuongororwa kwedata kunouya mumufananidzo. Makambani anofarira kuhaya muongorori we data kana outsource data analytics kuchengetedza yavo data uye kuronga data nenzira yekuti inozoshanduka kuve ruzivo rwakakosha rwekutora sarudzo dzinoshanda.
Muchikamu chino, tiri kuenda kuzokurukura chii chinonzi kuongorora data? Zvakanakira kuburitsa kunze data analytics uye zvimwe zvinhu zvine chekuita nekuongororwa kwedata. Saka, chekutanga pane zvese, ngatitarisei kuti chii chinonzi ongororo yedata.
Kufarira guru Data Analytics? Bata izvo zvazvino kuitika needu mahara eBook:
Kuongorora dhata inzira yekutora, kuongorora, uye kuyedza data kuitira kuti uwane ruzivo rwakakosha uye mhedzisiro yekutora sarudzo zvine mutsindo. Kuongorora kwedhata kiyi yekuwana njere inotyaira zvirinani sarudzo dzebhizinesi. Mumashoko akareruka, kuongororwa kwedata ndiko kududzira data kuita ruzivo rwakakosha Kune mhando dzakasiyana dze data dzakadai sehuwandu uye data rehunhu iro muongorori wedata anoshandisa kuongorora. Vaongorori veData vanounganidza data kubva kwakasiyana masosi uye voongorora uye voongorora data kuti vadudzire ruzivo rwakakosha uye mhedziso.
Kunyanya, kune marudzi maviri e data ayo anoshandiswa mukuongorora dhata kureva
Yakawandisa data:- Huwandu hwedata iri data iro rinogona kuyerwa kana kunyorwa pasi muhuwandu hwenhamba. Semuenzaniso kukwirira, saizi, kureba, mutengo, nzvimbo, vhoriyamu, hunyoro, tembiricha etc.
Yakakodzera data:- Inobata neruzivo, maitiro etsananguro nezvimwewo izvo zvinogona kucherechedzwa asi zvisingagoni kuyerwa. Semuenzaniso ruvara, kuravira, kunhuwidza, magadzirirwo, nezvimwe.
Usati waongorora, iyo data inounganidzwa kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana vachishandisa nzira dzakasiyana kana matekinoroji. Dzimwe dzenzira dzekuunganidza data ndedzinotevera.
Dhata rekutanga:- Ndiyo data inounganidzwa nemuongorori kana muongorori kekutanga. Iyi data inounganidzwa nemuongorori pachake. Iwo masosi ekuunganidza ekutanga data ari emibvunzo, ongororo, kubvunzurudza, uye kuongorora.
Sekondari data:- Ndiyo data iyo yatovepo uye muongorori kana muongorori anoshandisa iyi data kuongorora data. Kwayedza yekuunganidza yechipiri data imishumo, majenali, nhau, mabhuku, magazini nezvimwe.
The muongorori wedatha munhu kana hunyanzvi aiita ongororo yedata. Ndiye munhu anounganidza nekuongorora iyo data uyezve oturikira iyo data mune ruzivo rwakakosha iyo inobatsira manejimendi kutora sarudzo inoshanda kusangano.
Muongorori we data anoita basa rakakosha mu Data management. Muongorori wedhata anofanirwa kuve nehumwe hunyanzvi hwakakosha senge ruzivo rwechirongwa chirongwa, hunhu uye hunyanzvi hunyanzvi, dudziro yedata, inofanirwa kuve nekunzwisisa kwebhizinesi nezvibereko zvaro.
Dhata analytics kutsvagisa
Kunze kwekutsvaga ndiko kuwana masevhisi kubva kumutengesi wekunze. Dhata analytics kuburitsa kunze ndiko kuwana masevhisi e data analytics agency kana kambani. Data analytical outsourcing inobata nekuunganidzwa kwedata, kushandiswa kwemacomputer zviwanikwa, kushanda uye nhamba tsvagiridzo yekugadzirisa zvinhu zvisinganzwisisike zvebhizinesi kana maindasitiri uye nekupa mhinduro dzebhizimusi repamberi kune vatatu-vevatengesi.
Kuongorora kwedhata ibasa rakakosha sezvo zvichibatsira mukuita sarudzo uye kufungidzira kukura kwemusika wekambani. Dhata analytics inova yekumhanyisa uye inonetesa maitiro emabhizinesi sezvo ari marefu maitiro uye anoda kutarisisa kwakazara uye ruzivo nezve imwe ndima. Ndicho chikonzero icho makambani anofarira kushandisa data analytics kuongorora yakawanda dhata. Vanoongorora dhata vanoshandisa nzira dzakasiyana siyana dzehunhu uye huwandu hwekuwana musika uye vatengi ruzivo.
Nhasi, mazhinji emasangano ari kuona zvakanakira uye purofiti yekutsvaga kunze data analytics services. Dzimwe nguva kushomeka kwehunyanzvi zviwanikwa zvevanhu uye hunyanzvi hunotyaira makambani kuenda kunotsvaga data analytics. Izvo zvakanakira dhata rekuongorora kutsvagisa zvinokurudzira masangano kuti awane misika uye ruzivo rwevatengi uye voita sarudzo dzebhizimusi zvine hungwaru pahwaro hwedatha analytics ripoti.
8 Zvakanakira Kuburitsa Dhata Ongororo:
Kana iwe uchida kuve pamusoro mune ino yakatemwa-huro kukwikwidza nharaunda uye iwe usina nguva yakakwana yekugadzirisa iyo data wega, chingave chisarudzo chakangwara kuti iwe utore data ongororo yekutsvaga masevhisi kuitira kuti uchengetedze dhatabhesi rako rakasimba zvakakwana kutora sarudzo inoshanda uye inobatsira maererano nebhizinesi rako. Mamwe mabhenefiti ekutsvagisa data analytics akataurwa pazasi.
1. Dhijitari rakazvitsaurira revanyanzvi
Kuongorora dhata ibasa rakakosha uye rakaomarara sezvo muongorori wedhata achifanira kuita mabasa akasiyana siyana sekutora data kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana, kuunganidza ruzivo, chokwadi uye manhamba kuburikidza nenzira dzakasiyana siyana, wozoongorora ongorora nekupedzisa dhata nemhinduro dzinogona kuitika. Nekuita rese iri basa rakaomarara, masangano anoda timu yenyanzvi inogona kuvaitira. Paunobuda kunze muongorori wedhata unowana timu yakazvipira yevashandi ve data vane hunyanzvi uye vane ruzivo rwakakodzera rwekuongorora dhata.
2. Kuwana kugona:
Kunyangwe iwe uchinge uine vanhu veIT kana vaongorori muvashandi vako, zvakadaro pane mikana yekuti vanogona kunge vachiita mamwe mabasa avakapihwa kana dzimwe nguva zvinoitikawo kuti vanogona kuvhiringidza neimwe data kana ruzivo uye vangatadze tarisa pane data analytics. Nekudaro, kuitira kuti udzivise njodzi iyi, unofanirwa kuendesa kunze data data analytical service kuti isunungure chako chemukati sosi. Iyo yekutsvaga kambani ichakupa iwe yaunoda mhedzisiro uye chaiyo data ongororo yekambani yako.
3. Zvigadzirwa zvakasarudzika:
Iwo ma data edhisheni masangano ane akasiyana madhaidhi ekuongorora maturusi ekuongorora, kuronga uye kuona data. Imwe bhenefiti yekutsvaga data analytics kutsvaga ndeyekuti ivo vane ruzivo mundima yavo yebasa uye vakaita mapurojekiti akafanana kune mamwe masangano zvakare. Ivo vanogona kushandisa ruzivo rwavo uye vanouya nedzimwe nzira dzekugadzira uye dzekuvandudza dudziro yako.
4. Chengetedza mari:
Kuburitsa kunze kwenzira ndiyo inodhura-mari kune chero mhando yemasevhisi. Iyo inochengetedza mari uye nguva zvakare kana iwe ukakunda kunze kwemasevhisi e data analytics. Zvichava zvinodhura kana iwe uchihaya mainjiniya esoftware, mamaneja eprojekti, uye nyanzvi dzedhatabhesi zvakasiyana kuti zviongororwe dhata. Asi kana iwe ukaburitsa kunze kwedatha analytics masevhisi zvinodzikisira mutengo wako.
5. Sevha nguva:
Sezvatakambokurukura kuti agency yekuburitsa iri ine timu yehunyanzvi nyanzvi dzinoziva chaizvo zvekuita, maitiro uye maitiro ekushandisa nguva futi. Saka, kuhaya kambani yekutsvaga data analytics ndeyekuchengetedza nguva.
Kuburitswa kwedata analytics vamiririri kunoona kwakakodzera uye kwakarongeka manejimendi, kuronga uye kuchengetedza yako akakosha data kune akawanda mapuratifomu
7.Mhando yepamusoro masevhisi:
Outsourcing data analytical agency anokupa iwe yepamusoro-soro sevhisi inoenderana neyako Data management, kuchengetwa kwedata, kududzira etc.Ichakubatsira iwe mukuita inobudirira bhizinesi sarudzo. Izvo zvakare zvakarerutsa yako yekutora danho maitiro.
Sezvo data rebhizinesi riine ruzivo rwakakosha kwazvo uye rwakavanzika zvine chekuita nebhizinesi rako, vekunze vanoona kuti vanochengetedza data rako.
Nekudaro, data ongororo yekutsvagira inobatsira bhizinesi rako kuunganidza ruzivo, kuunganidza dhatabhesi uye kududzira ruzivo runobatsira iro rinobatsira bhizinesi rako mukukosha kwesarudzo.
Unoda tech solution kana kubvunza kune rako bhizinesi? Taura nekutaurirana.